YEYINTNGE(CANADA): Thursday, October 24
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/24/20130အကြံပြုခြင်း
ပြင်ဆင်သင့်သလား လူထုဆန္ဒခံယူဖို့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုများ ပြုလုပ်
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို လိုသလိုရေးဆွဲပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လူထုကို အတင်းအဓမ္မ ထောက်ခံခိုင်းကာ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းစနစ်များနှင့်သွေဖယ်နေသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေများကို အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲလိုသလား၊ ပြင်သင့်သည့် အချက်များကို ပြင်ဆင်သင့်သလား လူထုဆန္ဒခံယူဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဆောင် စီစဉ်နေသည်များကို အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု အင်းစိန်မြို့ နယ် အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တစ်ချို့ ထံမှ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို လာမယ့် ၂၆-၁၀-၂၀၁၃ မှာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲကို ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ပြည်သူလူထုများ မသွားရဲအောင် ဟန့်တားမှုများ ရှိနေကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်များသို့ ပေးပို့ရန် ဖောင်ပိတ်ချိန်ဖြစ်သွား၍ မမှီတော့ကြောင်း သတင်းများတက်လာပါသည်။
အကယ်၍အထက်ပါသတင်းများအတိုင်းမှန်ကန်နေပါကကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၏စနစ်ဆိုးသည်ယနေ့တိုင် ဖျောက်ဖျက်မရဖြစ်နေသေးကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှ ရေးသားမှုအပေါ် ချင့်ယုံနိုင်ပါသည်။ သတင်းအသေးစိတ်ကို ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီစနစ် ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို ဆန္ဒရှိသူတိုင်း ဤသတင်းကို နီးစပ်ရာပြည်သူလူထုသို့ပေးပို့၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ (သို့မဟုတ်) အသစ်ရေးဆွဲနိုင်ရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲများ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးတော့ မရှိသေးပေမယ့် ကျေးရွာတွေမှာ မြို့နယ်NLD ရုံးကမသိအောင် SB က nld တွေရဲ့စာရင်းကောက်ခိုင်းလိုက်လို့ဆိုပြီး ကျေးရွာစာရေးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအချို့လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်. . .ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်nld ရုံးကဒီအကြောင်းသတင်းရလို့ SB ကိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုကောက်ခိုင်းထားသလား ဘာအတွက်လဲ . .ဆိုပြီးမေးတော့ SB က ကျွန်တော်တို့မကောက်ခိုင်းပါဘူး ဒီကိစ္စကမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးကခိုင်းတာထင်ပါတယ်ဆိုပြီး ရှောင်သွားတယ်. .သေချာတာက ဘာအတွက်စာရင်းကောက်တယ်ဆိုတာကို ခါတိုင်းလိုအကြောင်းအရာသူတို့မပြနိင်ကြတဲ့အတွက်. . . .ဒါဟာ ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ကျေးရွာလူထုမတက်ရောက်ရဲအောင် အစီစဉ်ရှိရှိကြိုတင်ခြောက်လှန့်ထားတဲ့သဘောလို့ယူဆပါတယ်. .ဒီအမိန့်ဘယ်ကလာတယ်. .ဘာကြောင့်ကောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာမပြောနိင်ပဲနဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လိုက်ကောက်တယ်ဆိုတော့ မရိုးသားမှု့ဆိုတာသေချာပါတယ်ဗျာ. . .
နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦး ဖြစ်ရန်အတွက် သူနှင့် မိသားစုအားလုံးကို အစစ်ဆေးခံရန် အဆင်သင့် ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ယနေ့ နေပြည်တော်လွှတ်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မီးဒီယာများနှင့်တွေဆုံ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောခဲ့သည်။
(ဓာတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
ဒီမို ဖက်တီး ကျနော်တို့ ပါတီနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့မှာ သြဇာခံတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အစစ်ခံရဲပါတယ်ဗျ
နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး အထိ ရောက်လာနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို မြန်မာ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘီဘီစီကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေလည်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရတာပဲ၊ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျမရဲ့ နိုင်ငံမှာသာ မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှာ မွတ်စလင်ပါဝါ (ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်ပါဝါ) ဟာ အလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် (စိုးရိမ်မှု၊ ဂရုပြုမိမှု) တွေ ရှိကြတယ်ဆိုတာ ရှင်လည်း လက်ခံနိုင်မှာပါ ။
Aung San Suu Kyi - “You, I think, will accept that there’saperception that Muslim power, global Muslim power, is very great and certainly that is the perception in many parts of the world and in our country too.”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဘီဘီစီ အင်တာဗျူး)
ဓါတ်ပုံ - BBC Interview
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘီဘီစီကနေ အင်တာဗျူးသူလေးက မီရှယ်ဟူစိန် ဖြစ်ပါတယ် ။ ပါကစ္စတန်မှာ မွေး၊ ယူအေအီးမှာ ကြီးပြီး အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းပြီး မီဒီယာဝင်လုပ်နေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗြိ တိ သျှ အ တိုက် အ ခံ ပါ တီ ရုံး ခန်း